के तपाईलाई मधुमेह छ ? यदि त्यसो हो भने यी खानेकुरा बढि खानुहोस – Halkhabar kura
२४ माघ २०७६, शुक्रबार ११:४६
के तपाईलाई मधुमेह छ ? यदि त्यसो हो भने यी खानेकुरा बढि खानुहोस
काठमाडौं । ब्रोकाउलीमा भरपूर मात्रामा फाइबर हुन्छ । त्यसैले यो मधुमेह बिरामीहरुका लागि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । फाइबरको उच्च मात्राको अलावा यसमा क्यालोरी निकै कम हुन्छ र पर्याप्त मात्रामा भिटामिन ए र सी हुन्छ । ब्रोकाउलीको सेवन गर्दा वजन घटाउन पनि सहयोग पुग्छ । मधुमेहका बिरामीहरुका लागि सिमी एउटा राम्रो विकल्प हो किनकि यसमा अधिक मात्रामा प्रोटिन हुन्छ ।
यसका अलावा यसमा अन्य पोषक तत्व पनि हुन्छन्, जस्तै प्रोटिन, आइरन, क्याल्सियम, पोटासियम, भिटामिन ए, फोलेट र म्याग्नेसियम आदि । यसले कार्बोहाइड्रेडलाई चाँडै टुक्र्याउने काम पनि गर्छ ।
पिँडालु: पिँडालुलाई तरकारीका रुपमा मात्र नभएर फलहारका रुपमा पनि खाने गरिन्छ । यद्यपि यसभित्र रहने पोषकतत्वमा हामी ध्यान दिदैनौं ।
यसमा पोटासियम, भिटामिन ए, सी, क्याल्सियम र आइरन जस्ता कैयन् जरुरी पोषक तत्व हुन्छन् । अत्यधिक फाइबरका कारणले यसलाई पचाउन पनि सजिलो हुन्छ । एन्टिअक्सिडेन्ट्सको अधिकताले गर्दा यो छालाको लागि फाइदाजनक हुन्छ । साथै यो डाइविटिजको रोगीहरुका लागि पनि लाभदायक हुन्छ ।
लसुन: लसुनले ब्लड सुगर कम गर्न एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । त्यसैले यदि तपाईं सुगरको बिरामी हो भने दैनिक विहान लसुनको दुई-तीन कल्ली चबाउने गर्नुस । यसले उच्च रक्तचाप तथा मुटुको बिमारीलाई पनि लाभ पुर्‍याउँछ । डाइबिटिजले क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्छ तर लसुन क्यान्सरलाई रोक्ने निकै शक्तिशाली औजार मानिन्छ ।
गाजर र काँक्रो: मधुमेहका बिरामीहरुले गाजरको सेवन गर्नैपर्छ । गाजरमा बीटा-क्यारोटिन पाइन्छ जसले इन्सुलिनलाई नियन्त्रण गर्छ ।
हृदय रोगबाट बचाउँछ: अनारको बोक्रामा धेरै मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट हुने भएकाले यसले हृदयको रोगबाट टाढा रहन मद्दत् गर्छ । साथै यसले कोलेस्ट्रोललाई सन्तुलित पार्न पनि मद्दत गर्छ । १ चम्चा अनारको बोक्राको पाउडर तातो पानीमा मिसाएर दैनिक पिउने गरियो भने यसले तपाईको शरीरलाई धेरै फाइदा गराउँछ ।
हड्डीलाई बलियो बनाउँछ: यदि तपाईको हड्डी कमजोर भएर समस्या देखापरेको छ भने अनारको बोक्राले तपाईको समस्या पक्कै पनि कम गर्नेछ । यसमा हुने एन्टीब्याक्टेरियल गुणका कारण यसलाई पानीमा मिसाएर सुत्नु अघि पिउँदा निकै राम्रो हुन्छ ।
घाँटीको दुखाई: यदि तपाईलाई टन्सिल भएको छ वा घाँटीमा समस्या देखा परेको छ भने अनारको बोक्रा तपाईका लगि निकै प्रभावकारी सावित हुन सक्छ । त्यसका लागि यसको पाउडरलाई पानीमा उमालेर पछि छानेर खाएमा यसले तपाईको दुखाइ कम गर्न धेरै मद्दत गर्छ ।
Previous जग्गा प्रकरण : अख्तियार पूर्वाग्रही भएको काङ्ग्रेसकाे ठहर, सडक आन्दोलन सुरु गर्ने
Next गर्भवतीको समयमा चकलेट सेवन, हानिकारक कि फाइदाजनक जान्नुहोस